Ọdụm Ihi ụra, na-adanye na Galapagos Islands | Akụkọ Njem
Enric Gili | | Ecuador, General, Osimiri, Quito
Ọdụm Ihi ụra (ma ọ bụ Ogba Ọkụ na Bekee) bụ agwaetiti a na-ebighi ebi nke dị kilomita ole na ole site na San Cristóbal archipelago, na Galapagos Islands National Park (Ecuador). Ọ bụ ebe echedoro kpamkpam ebe amachibidoro ịba ụra, ihi ụra ma ọ bụ ịrụ ọrụ ọ bụla, naanị ịmakpu mmiri na ịgagharị n'oké nkume ka a na-ekwe.
Ọ bụ ezigbo njirimara nke oke ugwu nke ugwu mgbawa mebere site na obere agwaetiti abụọ nke mmiri mmiri kewara, onye ọ bụla n'ime ha ruru ihe karịrị 100 mita n'elu oke osimiri na 100 ọzọ n'okpuru oké osimiri. Mgbidi abụọ dị egwu na nkume ọ bụla na ọwa dị warara dị n'etiti nke mmiri mmiri na-agagharị.
Ndokwa a pụrụ iche nke agwaetiti ahụ emewo ka ọ bụrụ otu n'ime ebe kachasị mma mmiri na-agba mmiri na Galapagos Islands na ụwa. Nkume Gburugburu Kicker bi n'ụdị coral na ụdị mmiri dị iche iche dị ka turtles, hammerhead shark, shark blue, ọdụm ọdụm, ...
1 Kedu ka esi enweta León Dormido?
2 Kedu ihe ị ga-eme na ihe ị ga-ahụ na Rock Ayer?
Kedu ka esi enweta León Dormido?
Bụ agwaetiti ma chebe ya na iwu ogige mba nke Ecuador, enwere ike iru naanị n'oké osimiri. Iji nweta Galapagos, a ghaghị ime ya site n'ụgbọelu site na ala, ọtụtụ ụgbọ elu na-apụ site na Ecuador na Guayaquil, ọ ga-ekwe omume iru paradisiacal Islands si Central America. Na nbata ọpụpụ ọ bụla nke ọpụpụ nke agwaetiti, ha na-eme obere nyocha iji jide n'aka na ị naghị abanye ma ọ bụ buru ihe ọ bụla nwere ike igbochi usoro ndụ pụrụ iche nke ogige ahụ.
Ihe kachasị mfe na-amalite site na Puerto Baquerizo Moreno, obodo kachasị mkpa na San Cristóbal Island. N'ihe na-erughị awa abụọ ka agwaetiti ahụ rute. A ga-esi n'oké osimiri rute Isla San Cristóbal site na Santa Cruz (awa abụọ ma ọ bụ atọ) ma ọ bụ site n'ụgbọelu site na ala, ọ bụ otu n'ime agwaetiti ole na ole nwere ọdụ ụgbọ elu.
Nhọrọ ọzọ sitere na isi obodo Galapagos, Puerto Ayora n'àgwàetiti Santa Cruz.. Na nke a ọ ga-abụ njem nke ihe dịka awa 4. N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịgbazite ụgbọ mmiri nke onwe gị ụbọchị ole na ole wee gaa ịgagharị agwaetiti kachasị mkpa nke ogige mba ahụ gụnyere ịgbanye ebe a.
Ihe ọ bụla n'ọdụ ụgbọ mmiri si malite, ọ bụ iwu na ị ga-eji ụgbọ mmiri obi ụtọ gaa ikike pụrụ iche site na gọọmentị mpaghara na nke Ecuador, ya bụ, ịbịaru amaba na ọdụm na-ehi ụra chọrọ ịnweta ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ nkeonwe nwere ikike.
Ihe ọnụahịa nke otu onye si Puerto Baquerizo Moreno dị ihe dị ka $ 80 ma gụnye ụzọ ụbọchị niile na-akwụsị n'ụsọ osimiri na-amaghị nwoke (ọkachasị Playa del Maglesito), ngwa ndakpu mmiri na akụrụngwa na imi mmiri nke ihe dị ka awa 2 na Rock Kicker. Amaghị m ọnụahịa sitere na Puerto Ayora. Ọnụ ego ịgbazite ụgbọ mmiri maka otu izu ma ọ bụ ọtụtụ ụbọchị dị oke elu, ọ bụ ezie na ịgagharị na Galapagos Islands n'onwe gị abụghị ihe dị ọnụ ala. N'okwu m, agara m na nke m ma gbazite njem ahụ site na Puerto Baquerizo Moreno.
Kedu ihe ị ga-eme na ihe ị ga-ahụ na Rock Ayer?
Ka anyị na-abịarukwa nso na León Dormido, anyị ahụlarị na ọ bụ ebe anwansi, nke dị egwu, n'ezie otu n'ime ihe kachasị mma na mba ahụ dum. Bogbọ mmiri ahụ mgbe niile ha na agaghari n’agwaetiti ahu ka ha hu ihe puru iche nke okwute ya na nnunu bi ya. Mkpọda nke mgbidi ya kwụ ọtọ ma dị omimi nke ukwuu na ị nwere ike ịbịaru agwaetiti ahụ nso iji tụgharịa uche n'ụdị anụmanụ niile nke agwaetiti ahụ (ọtụtụ n'ime ha ka a na-ahụ naanị na Galapagos). Ihe a nwere ike ịhụ n’ebe a dị ezigbo iche na ihe anyị nwere ike ịhụ na Mediterenian, ọtụtụ ọtụtụ karịa na amaghị nwoke.
Ihe kachasị mma dị n'okpuru oké osimiri, mmiri mmiri ma ọ bụ nsị. Ọ bụrụ na ebili mmiri na ihu igwe ekwe ya, ịnwere ike ịmaba n'okporo ụzọ dị warara. N'oge a nke oke osimiri nwere oke osimiri siri ike, yabụ ana m akwado ka ị na-eyi akwa mmiri ma ị na-agba mmiri ma ọ bụ na-agba mmiri, oke osimiri dị elu n'ogologo afọ mana ọ ka mma iyi uwe.
N'okwu m, tupu m maba n'ime mmiri ahụrụ m Ọtụtụ ọdụm nke oké osimiri na-egwu mmiri n'akụkụ ụgbọ mmiri ahụO nyere m ụfọdụ echiche na ụjọ ma agbanyeghị, ọ ga-abụ ahụmịhe pụrụ iche, yabụ m maliiri n’ime mmiri n’echeghị echiche banyere ya.
N'ime mmiri, etinyere m enyo anya m, lee anya m na ihe ijuanya! Anu azu shark, azu shark. Ọ dịtụbeghị mgbe mmiri mikpuru, ma ya fọdụzie ọ na-eji mmiri sharks gwuo mmiri. Na Spain ha na-emechi ụsọ mmiri niile mgbe tintorera rutere n'ụsọ osimiri, ebe a ka anyị na ha ga-aga igwu mmiri dị ka a ga - asị na ọ nweghị ihe merenụ, ee, n'ebe dịtụ anya ma ọ bụrụ.
Na mbido anyị na-agbanye mmiri site na ọwa na-ekewa nkume abụọ ahụ, na-ele ala A hụrụ shark, ụdị azụ azụ na ọdụm dị n'oké osimiri. Ná ngwụsị nke ọwa a, anyị na-aga nnukwu agwaetiti iji tụgharịa uche na coral na azụ bi n'akụkụ ya, agba agba niile. Osimiri ọdụm na-egwuri egwu mgbe niile, dị ezigbo nso na otu ahụ.
Anyị gara gburugburu agwaetiti ahụ niile iji nwee obi ụtọ na agba nke okwute, azụ na coral, n'oge niile enwere ike ịhụ ha nduru, ụzarị na ọdụm. Anyị ahụghị azụ shark ndị ahụ, dịka a gwara anyị na ọ fọrọ nke nta ka ha na-agagharị na channelụ ahụ.
2 na mmiri mmiri na snorkeling. Naanị ihe dị ịtụnanya, ahụmahụ m nwere ike ikwu ma ọ bụrụ na ị gaa Ecuador na Galapagos.
Echere m na ọ bụ ebe kachasị mma iji nwee obi ụtọ ma ọ bụ mụta ịkụ mmiri, ihe niile ị hụrụ bụ nke enweghị atụ na-enweghị atụ, ejiri m n'aka na ị gaghị enwe mmechuihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Ecuador » Ọdụm Ihi ụra, na-agba mmiri na Galapagos Islands
Ntughari nke mkpọmkpọ ebe nke Pompeii